#AkanPoetry – Mum Cee
2 Comments on AGYA OWUO
Owuo de suro ma nnipa de papa mpata …a ɛnfata Ma awofoɔ …ebu wɔn ani gu wɔn bɔne dodoɔ …so De kyerɛ sɛ bɔne biara tumi hyɛ papa so b Ɛbɛ yɛ dɛn na bɔne nsuma? Ɛbɛ yɛ dɛn na nnipa apɛ papa soma? Ɛbɛ yɛ dɛn na nkyirimma ani mfa suaadeɛ …wɔ aba bɔne […]
Tags #AkanPoetry, #GhanaianLanguagePoems, #PoemsAboutDeathInAkan, #TwiPoetry
No Comments on ƆDƐNKYƐM ATOWERƐNKYƐM
Atowerɛnkyɛm ato ɔdɛnkyɛm …ama asuo atwa n’asuo …asaase atwe n’asɛn Ama ewiemu nkoaa n’akɔyɛ n’anidasoɔ Nso mmoanoma a wɔ wɔ ntaban nyinaa akyiran no …enti ɔbɛyɛdɛn atu akɔdan soro? II Asuo se ne honam nnyɛ hwitahwita …nso moanoma a wɔn de sen no de bebree gu asuo kokoso Asuo se n’anum wɔ se huhuuhu …n’ɛnso […]
Tags #AkanPoetry, #GhanaianLanguagePoems, #TwiPoetry, HATRED.
No Comments on ƆMAMA
Abena mensɛm Akonya asɛm W’agyina mmra ntɛm Akɔpɛ ne ho asɛm Afei adidiatɛm …n’agye ne nsɛm Ɔno a ɔyɛ amamasɛm b Sɛ wo pɛ ntɛm …wɔ abrabɔ nsɛm Na wo tu pɛnsɛ …te sɛ atropi aburo a Wo puro gu fam …ma nɔti susɔ wo Ammantɛm ngyina mmransɛm nnyɛ amamasɛm d Onyansani n’ehunu abotesɛm wɔ […]
Tags #AkanPoetry, #GhanaianLanguagePoems, #TwiPoetry